Sendikà · Novambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Sendikà · Novambra, 2017
Tantara mikasika ny Sendikà tamin'ny Novambra, 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Novambra 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana19 Novambra 2017
Tsy teny siantifika fotsiny ampiasain'ny Injeniera Mekanika ny teny hoe fahombiazana . Nanapa-kevitra hampihatra izany eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ilay Ejiptiana bilaogera Ahmed Tharwat (Ya Marakby).
Tsy vitan'ny vola na ny fotoana ihany vao afaka amboarina ny solosainao indraindray ao Moskoa fa ilaina ihany koa ny endrikao ivelany, ny faharetanao ary ny hafanam-ponao manokana . Nitatitra ilay mpisera LJ kmaka tamin'ny resadresaka vao haingana niarahana tamin'ny solontenan'ny sampan-draharaha fanohanana ara-teknika.
Sahanina Any Ivelany Ny Ady Ao Iraka sy Afghanistan
Filipina06 Novambra 2017
Ny asa amin'ny foibem-piantsoana (call center) no asa irian'reo tanora marobe nahazo diplaoma ao Filipiana satria tsara karama. Nahazo 1,12 miliara dolara tamin'ny fidiram-bola ny indostrian'ny BPO ao Filipina ary nampiasa olona maherin'ny 112.000 tamin'ny herintaona.